Religion/Diin Archives - Page 2 of 4 - Land Of Punt
Category - Religion/Diin
Astaanta Falaadha “Ra”
Dhismaha ka turjuma dawladnimada ee looyaqaan “Washington Monument” ee lagu arko caasimadaha wuxuu noqonayaa falaadha ka samaysan jaajur lafiiqay oo kor loo taagay oo loo ee kaysiiyey falaadh “light”. Falaadhu...
Astaanta Gashaanka “The shield”
Astaanta Gashaanka “The shield” inaguma cusba oo waa astaan soojireen ah. Waxaad ku dhex arkay oo laga yaqaan ciidamada iyo diimaha lakala aminsanaa tarikhda inasoo martay. Wakhtiyadii hore ee seefta iyo waranka laku...
Astaanta Xaaxeeyada “Shell”
Astaanta xaaxeyada “Shell” waxay ka amineen inay barako xambaarsantahay oo khasatan qaabilsantahay in hadii laqaato ama laxidho aydaan fiqri iyo gaajo isarkayn. Hadii hindise inaad maalqabeen noqotid kusoo dhaco waaxaad...
Astaanta Faraska duula “The Pegasus”
Griiga, intaan mufakarayaasha waa weyn sida Socratees iyo Plato usoobixin qoomiyad giriiga waxay ahaayen bulsho aan waxba isweydiin oo wixii loolayimado qaadanjiray. Wakhtigaa ay ilaahyada badan lahaayen waxaa jirtay oo ay...
Astaanta Boromiitiyos “Prometheus”
Giriigi hore, dabka way ka barakaysan jireen. Wakhti jaahiliga ee waxkasta dadka loogu sheekayn jiray ayaa aminsanaa in dabka samada ilaahyadu ka keenen si habeenkiina inta laysu yimaado ilaahyada loo caabudo. Waxay habeenki ku...
Astaanta Shirkada Guul “Nike”
Giriigi hore ee aminsanaa 12 ilaah ee Olombiyanka ayey kujirtaa “Nike”. Nike micno ahaan waxay noqonay GUUL guushana waxay ku gaadhi jirtay laba kabood oo baalal leh. Nike waxay qaabilsan tahay ciyaaraha iyo guulaha. Sifaha...
Astaanta Yurub “Europa”
Wakhti jaahiligii Giriiga waxaa jirtay inan qurux badan oo la odhanjiray “Europa”. Europa waxay kasoo jeeday qoys caan ah oo degaanka badhatamaha iyo yurubta-bari laga qadariyo. Waxaa dhalay reer boqorka Finooshiyanka...
Khurafaadkii Greega “Greek Mythology”
Gayiga looyaqaan waqooyiga hoose ee Yurub (Greece); intaan cilmi samaawigu soo gaadhin waxaa laga aminsanaa in ilaahyo badani ay jiraan kuwaa soo dunida maamula. Giriiga waxaa laga lacaabudi jiray 12 asnaab oo loo yaqaanay...
Astaanta Tufaaxa “Apple Computer Co”
Shirkada “Apple” ee samaysa agabka isgaadhsiinta siiba teleefonada waxaa astaan u ah tufaax “Apple” dhinac laga hudhay. Ka hor intaanay shirkadu astaan qaadan waxaa lagu yaqaanay oo calamad u ahayd saanisyankii caanka...
Astaanta Giraanta “The Vesica Piscis”
Astaanta “The Vesica Piscis” oo noqonaysa laba giraan oo isku dhexjira oo badhtamaha ku samaynayso calaamad la baxday magaca “The Vesica Piscis”. Waa astaan qadiimiya oo ay isticmaali jireen quruumo hore oo wax ka...